août 2020 - FJKM Amparibe Famonjena
ALAHADY 30 AOGOSITRA
" MAHATOKY HATRAMIN’NY FAHAFATESANA NY MINO "
Alahady natokana itondrana am-bavaka ny Akany fialofana Tangaina.
Alahady farany ibanjinana ny lohahevitra “Mahatoky hatramin’ny fahafatesana ny mino” ; Alahady faha roa ambin’ny folo (12) manaraka ny Trinite ; Alahady natokana itondrana am-bavaka ny Akany fialofana Tangaina ; Ny Mpitandrina ANDRIANTSILAVO Nofy no nitarika ny fotoana ; Ny Mpitandrina RAHARIJAONA Solofonirina kosa no nitory ny tenin’Andriamanitra ary ny Asa 21, 10 – 14 no nangalana ny toriteny
Ny litorjia , endriny faharoa no nentina nitondrana izao fanompoam-pivavahana izao.
Taorian’ny fiarahabana Apostolika nataon’ny mpitarika dia ny tenin’ny Soratra Masina araka izay voalaza araka ny SALAMO faha 66 and. 1-4 no noraisina ho fiderana sy fisaorana an’Andriamanitra.
Ny hira FF 6 and 1 – 3 no hira nentina nanombohana ny fotoana, ho fiderana an’Andriamanitra.
Zoky RANDRIAMBELOSON Malalatiana no nanatontosa ny dimy minitran’ny Sekoly Alahady
Jesoa ô misaotra anao izahay noho ny amin’izao fotoana izao. Ny Fanahy Masina anie hanazava ny sainay mba ho azonay izay tianao ambara aminay. Mitenena Jesoa ô fa vonon-kihaino sy hankatoa izahay Amen.
Ny Asan’ny Apôstoly 4,12 no nangalana ny hafatra ho an’ny tanora. “Ary tsy misy famonjena amin’ny hafa ; fa tsy misy anarana hafa ambanin’ny lanitra nomena ny olona izay ahazoantsika famonjena.”
Jesoa Kristy irery ihany no tokony itokiantsika amin’ny fotoana rehetra sy amin’ny zavatra rehetra. Azy aloha izay vao manapa-kevitra. Manontany Tsy mitoky amin’ny olona na amin’ny zavatra na amin’ny herin’ny tena na amin’ny fombafomba maro samihafa.
Tantara fohy: Fiaran-dalam-by mampitohy an’I Angleterre sy Ecosse no tojo andro ratsy. Mandalo moron-tsiraka ity fiaran-dalamby ity, ratsy anefa ny andro ary dia nanonja mafy ny ranomasina ka niakapoka tamin’ny tetezana. Nijanona ny mpamily teo anoloan’ny tetezana satria nanahy izy sao tsy hahazaka ny fiarandalamby ilay tetezana. Nanoloana izany fihetsika nataony izany dia nitabataba ny olona nandodona ilay mpamily mba hiroso. Narosony ary ny fiara tampoka teo natelin’ny rano ny tetezana niaraka tamin’ ilay lamasinina. Jesoa Kristy irery ihany no tokony ametrahana ny fitokisana. Tao anatin’ity fiaran-dalamby ity dia nitoky tamin’ny mpamily ny mpandeha, ilay mpamily kosa dia nametraka ny fitokisany tamin’ny tetezana. Arak any tenin’Andriamanitra natolotra antsika teo dia Jesoa Kristy irery ihany no tokony ametrahantsika fitokisana. Isika dia toy ny mpandeha handeha lavitra ho any amin’ny fiainana mandrakizay. Jesoa Kristy irery ihany no lalana ahatongavantsika any, Izy irery no mpamonjy azo antoka. Ho avy ny fanadinam-panjakana, omena antsika zandry sy zanaka rehetra izany tenin’Andriamanitra izany. I Jesoa Kristy irery ihany no itokio, ankino aminy izay ataonao rehetra dia hahita fahombiazana. Rehefa mitoky amin’I Jesoa Kristy ihany koa isika dia ho tafita any amin’ny fiainana mandrakizay.
Nisy ny vavaka notanterahina taorian’izany : Jesoa ô, misaotra Anao izahay. Vonona izahay ny hatoky Anao amin’ny fotoana rehetra dia apetrakay eo am-pelatananao ry Tompo ireo zandry sy zanaka izay hanala fanadinana amin’ny erinandro mba hahatoky Anao hatrany Amen.
Mialoha ny fankalazana ny Tenin’Andriamanitra dia nohirain’ny Fiangonana ny hira FF 6 and. 2
Vavaka: RAZAFINDRABE Mamy Bam : » Ry Tompo Andriamanitray ô, dia mbola misaotra Anao izahay fa mbola tonga amin’izao fotoana izao ahafahanay indray mandray ny teninao. Misaotra anao izahay amin’ny mpanomponao izay hitondra aminay ny teninao. Koa Mangataka aminao izahay ampidino amin’ny mpanomponao ny Fanahy Masina hiasa mangina aminy ahafahany mamaky ny teninao ho teny velona tokoa ho sakafonay. Ny Mpanomponao izay itondra ny fanazavana ny teny dia androtsay ny Fanahinao Masina ka Ianao mihitsy no hanazava aminay ny teny fa ho fitaovana fotsiny ihany izy. Ary izahay izay handray dia mangataka aminao mba ho mpihaino Mankato ary hanao tokoa ny sitraponao. Izany dia ho voninahitrao ihany ry Tompo ô. Amen «
Testamenta taloha: Joba 2,1-10
Marka 10, 32-34
Ny hira FFPM 205 and. 4 no nohiraina mialoha ny toriteny.
Mamarana ny lohahevitra “Mahatoky hatramin’ny fahafatesana ny mino” isika izao.
Alahady faha 12 manaraka ny Trinite anio ary natokana itondrana am-bavaka ny Akany fialofana Tangaina
Ny Asa 21,10-14 no nangalana ny toriteny
Fotoana kely talohan’ny fotoanan’ny fankalazana ny andron’ny firavoravoana ny Pentekosta io fotoana izay niasan’i Lioka ao amin’ity Asan’ny Apostoly toko faha 21 ity ary fotoana izay fiomanana iakarana any Jerosalema . Anankitelo ny fotoan-dehibe eo amin’ny Jiosy izay anaovana fivahinianana masina iakarana any Jerosalema dia ny Paska, Pentekosta ary fetin’ny Tabernakely. Eto dia ny fotoana fiomanana ho amin’ny Pentekosta no voasoratra. Tao amin’izany fiomanana izany no nisian’ny ady hevitra sy dinidinika nifanaovan’i Paoly sy ny namany. Nafana ny fanenjehana ny Kristiana tamin’izany fotoana izany. Ary ireo mpitarika fiangonana Kristiana no tena nokendrena indrindra fa ny Apostoly Paoly. Tamin’io fotoana io dia nandrasan’ny Jiosy ny fiakaran’i Paoly tao Jerosalema. Tao an-tranon’i Filipo no nitoeran’i Paoly sy ny namany nanaovany izany dinidinika izany.
Ny vontoatin’ny dinidinika dia mahakasika ny hiakarana na ijanonan’I Paoly hiakatra any Jerosalema amin’ny andro fankalazana manoloana ny fanenjehana azy. Tamin’izany fotoana izany no nahatongavan’ilay mpaminany avy any jodia tao amin’ny tranon’i Filipo antsoina hoe Agapo. Izy dia nanambara fa hisy zavatra hanjo an’i Paoly. Nambarany fa ho samborina i Paoly rehefa tonga any Jerosalema ka ho kapohina sy ho ampijaliana ary ho vonoina mihitsy i Paoly. Tsy naharesy lahatra an’i Paoly hijanona i Paoly ary hoy ireto namany ireto hoe” Aoka ny sitrapon’Andriamanitra no ho tanteraka” Nanoloana izany dia nanambara Paoly fa vonona na dia hanaraka hatramin’ny ainy aza ho voninahitr’I Jesoa Kristy Tompo izay niantso azy. Na dia fantatra aza ny zavatra mety hanjo amin’ny fanatontosana ny asan’ny Tompo dia aoka isika hianatra ny nataon’i Paoly hanahaka an’i Jesoa Kristy ka hanambara sy haneho fa tsy hatahotra amin’ny fanatanterahana ny asan’Andriamanitra ary mijoro vavolombelona na dia hatramin’ny fahafatesana aza.
Tsy matahotra ny mino amin’ny fanatontosana ny asan’ny Tompo na dia hihatra hatramin’ny fahafatesana aza eny tsy miemotra na dia fantatra aza ny loza mety hanjo. Tian’i Paoly ampitaina amin’ny namany sy ny vahoakan’Andriamanitra izany toe-tsaina izany. Izany toe-tsaina izany dia voafehy amin’ireto anankiroa ireto: Voalohany Ny asan’Andriamanitra vita no vain-dohan-draharaha ; Faharoa Andriamanitra dia tsy mampanao zavatra tsy ho vita.
Izany fomba fijery izany no nahatonga an’I Paoly hanoratra ao amin’ny I Korintiana 10,13 manao hoe “Fa tsy misy fakam-panahy izay mahazo ny olombelona ka tsy zakany. “ Izany no aoka ho ao an-tsaintsika manoloana ny asan’Andriamanitra. Tsy mamela antsika ho irery ny Tompo, Tsy maintsy vita ny asan’Andriamanitra ary Andriamanitra tsy hampanao zavatra antsika zavatra tsy vitantsika.
Ny perikopan’i Joba dia mampiseho antsika fa na dia mafy aza ny fitsapana nahazo an’i Joba dia nifikitra sy nahatoky an’Andriamanitra izy. Na dia naneso sy nandatsa ary niteny ratsy an’i Joba aza ny vadiny dia nanaiky izay fandaharan’Andriamanitra hiatra taminy Joba. Nandalo taminy ny aretina ny fahoriana ny fahantrana kanefa tsy niala tamin’Andriamanitra Joba. Ny olona mino dia mahatoky hatramin’ny fahafatesana.
Mijoro vavolombelona ny Kristiana na dia hatramin’ny fahafatesana aza. Ohatra amin’izany I Paoly izay vonona na dia hatramin’ny fahafatesana aza. Ny Alahady 12 Aogositra dia alahady natokana ahatsiarovana ireo Maritiora. Ny Maritiora dia nijoro vavolombelona hatramin’ny fahafatesana anisan’izany Paoly Apostoly sy ireo Kristiana nanerana izao tontolo izao anisan’izany Rasalama Maritiora, dadabe Rainimamonjy … Isika FJKM dia zanaky ny Maritiora ka tokony hijoro vavolombelona isika na dia hatramin’ny fahafatesana aza. Fotoana amelomana izany fahasahiana izany izao vanim-potoana iainantsika izao. Paoly dia niezaka naneho ny fanahafany an’i Kristy manoloana ny fahavononana ho vavolombelon’Andriamanitra na dia hanaraka hatramin’ny aina aza ary namporisika ny olona hanao izany koa Paoly.
Izay sahy amin’ny fijoroana vavolombelon’ny Tompo na hatramin’ny fahafatesana aza dia manana ireto toetra ireto:
voalohany dia miha-mahery izy manoloana ny sakana amin’ny fanatontosana ny asan’Andriamanitra, tsy miady irery izy fa miaraka aminy ny Tompo.
faharoa dia mitombo sy miha-mafy ny finoany. Ary mitafy ny herin’ny Tompo izy ka mahatsapa fa feno ny Fanahy Masina ka hanahaka ny Tompo ary ho vonona hatramin’ny fahafatesana.
Ny niainan’i Paoly tamin’izany fotoana izany dia sahala amin’ny niainan’I Jesoa.
Samy nahalala ny loza hanjo Azy Jesoa sy Paoly kanefa tsy nihemotra izy.
Andriamanitra dia manana ny hevitra iheverany antsika ary hevitra ahatonga fiadanana fa tsy loza. Teny fampaherezana ao anatin’ny fotoana farany izay sarotra izany. Teny nentina hampaherezana ny zanak’Israely izany rehefa ho entina any am-pahababoana izy ireo. Manana ny hevitra hiheverany ny olony ny Tompo ary fiadanana fa tsy loza. Misy olona mijoro vavolombelona nitantara izay nahazo azy rehefa voan’ny Corona-virus. Tsy manan-javatra tenenina sy ambara afa-tsy ny vavaka sy ny anaran’i Jesoa. Mahery vaika ny fitsaboana. Hoy izy “Raha amin’izao fotoana izao aho no afaka miantso an’i Pasitera ka afaka maheno ny feon’i Pasitera dia mba zava-dehibe amiko izay ka na dia ho faty aza aho dia fifaliana ho ahy izany satria sady tafahorina tsara tao amin’ny finoana aho no nahazo fampaherezana tamin’ny Mpitandrina.” Rehefa sitrana izy dia niantso ka niteny hoe”Isaorana ny Tompo, omem-boninahitra Jesoa satria nomeny fandresena aho ka mbola sitrany ny hananako tombon’Andro entiko anompoana azy”. Ry Kristiana Amparibe Famonjena, hoy ny Tompo aminao “Aza matahotra ianao fa momba anao Aho ary aza mierikerika foana ianao fa Izaho no Jehovah Andriamanitrao miara mandia aminao miaraka aminao ary mijery sy mitsinjo anao hatrany” Tsy maintsy ho resy io aretina io ary omen’Andriamanitra fandresena isika izay mitazona ny finoana an’i Jesoa Kristy. Tao anatin’ny fiaretany nandritry ny fanarahany ny Tompo i Paoly dia hoy izy ”Iza no ahasaraka ahy amin’ny fitiavan’I Kristy, fahoriana va, fanenjehana va fahafatesana va? “
Manoatra noho ny mpandresy isika amin’ny alalan’ilay tia antsika fa mahatoky aho fa na fahafatesana na fiainana na ny ambony na ny ambany na inona na inona amin’izao ady izao dia tsy ahasaraka antsika amin’ny fitiavan’Andriamanitra ao amin’i Kristy Jesoa. Teny nampahery ny fiangonan’Andriamanitra fahiny izany teny izany ary mbola ampaherezana antsika ankehitriny. Ry Fiangonana Amparibe Famonjebna ô, matokia fa ny fandresen’Andriamanitra mihitsy, ny fandresen’i Jesoa Kristy mihitsy no nomeny anao mba ho entinao mijoro sy manatanteraka ny asa. Aza kivikivy, aza reradreraka fa mijoroa hatrany, manàna fahasahiana tahaka ny fahasahian’ny Apostoly Paoly izay olombelona tahaka antsika ka nantsoina hanatontosa ny asan’Andriamanitra. Na mafy aza ny aretina na misy aza ny tsy fahasalamana dia mahatokia an’Andriamanitra, mahatokia hatramin’ny fahafatesana satria ao anatin’ny fahatokisantsika hatramin’ny fahafatesana no isatrohantsika ny satro-boninahitry ny fiainana izay omen’ny Tompo mpitsara marina amin’izay fotoana izay. Ary tsy ho antsika irery ihany arak any nambaran’ny Apostoly Paoly fa ho an’izay rehetra mino ny fisehoany koa ka mahatoky hatramin’ny fahafatesana satria manana an’i Jesoa Kristy velona ao anatiny izay miasa tsy manam-petra dia ny Fanahy Masina no mameno azy mba ahavitany ny asan’Andriamanitra sy ny fijoroany ho vavolombelon’I Kristy. Ho an’Andriamanitra irery anie ny voninahitra Amen.
Nanatanteraka hira iray ny Hasin’ny Famonjena taorian’ny toriteny.
Ny fanekem-pinoana laharana voalohany na ny fanekem-pinoana Apostolikoa no nanehoan’ny Mpianakavin’ny Finoana ny Finoany eo anatrehan’Andriamanitra sy ny Fiangonana.
Ry Tompo Andriamanitry ny famonjena anay ô, tsy mitsahatra izahay maneho fankasitrahana Anao fa Andriamanitra tia dia tia anay tokoa Ianao. Ary ny fitiavanao Tompo ô dia mialoha mandrakariva ny fitiavanay Anao. Mbola sitrakao indray Tompo ô ny andraisanay ny teny sy ny hafatrao izay notoriana taminay mba ampaherezanao anay hahajoro hatrany ho vavolombelon’ny Anaranao. Tsy hihaotra rehefa misy sarotra fa handroso hatrany ary hanatontosa ny zara fanompoana izay napetrakao hiantsoroana. Ho sahy mandrakariva hijoro vavolombelon’ny anaranao na dia misedra zava-tsarotra aza eo amin’ny fanatanterahana izany. Mivavaka aminao izahay Tompo ô ho an’ny fiangonanao, ho an’ny mpitondra fiangonana, ho an’ireo mpitory ny filazantsara rehetra, Tompo ô, apetrakay eo am-pelatananao izany mba hahavita tsara ny asanao. Ka tsy itsahatra sy ho voafatotra na ho voasakana izany asa fitoriana filazantsara sy fitaizana ao anatin’ny fiangonana izany. Ary izany indrindra no ahatsiarovanay ny Kristiana rehetra eto amin’ity Fitandremana Amparibe Famonjena ity sy ny zanaka am-pielezana rehetra na ny eto an-toerana izany na ny any am-pitan-dranomasina Mpamonjy ô mba haharitra hahatoky hatramin’ny fahafatesana anie izy ireny satria ao Aminao ihany no misy ny teny fiainana mandrakizay. Mivavaka aminao izahay Tompo ô ho an’ny ankizy sy ny tanora eo amin’ny fianaran’izy ireo ary indrindra ho an’ireo izay hiatrika fanadinana atsy ho atsy. Apetrakay feno eo am-pela-tananao izy ireo Tompo ô. Sy izany andraikitra sy adidy miandry azy izany fa ireo no taninketsan’ny fiangonana. Ireo no ho avin’ny firenena ary ireo no mbola antenainay fa mbola itondra hatrany ny finoana ka ifandimbiasana isaky ny taranaka ahavelona ny fiangonana sy ijoroany mandra-pihavinao Kristy. Mivavaka aminao izahay Tompo ô ho an’ny ankohonana sy fianakaviana kristiana rehetra eny fan a dia tsy kristiana aza Tompo ô amin’izao fotoana mangidy sy mafaitra ary sarotra izao. Apetrakay feno eo am-pela-tananao ny asan’izy ireny, ny momba ny fivelomany, eny ny momba azy manontolo satria misedra zava-tsarotra izy ireny fa ao ny very asa, ao ny miady amin’ny atao hoe inona no ho hanina androany ary inona no ho hanina rahampitso. Tompo ô, manana ny hevitra izay iheveranao azy ireny Ianao dia ataovy fantany fa Andriamanitra tsy mamela azy ireny ho kamboty Ianao fa mijery sy mitsimbina azy ary manafaka azy amin’ny sarotra. Mivavaka aminao izahay jesoa ô ho an’ity firenenay ity, ho an’izao tontolo izao mihitsy aza fantatray fa fantatrao rahateo fa ny fiatrehana izany fiatrehana ny afitsok’ity valan’aretina Covid-19 ity dia tsy eto Madagasikara ihany na eto amin’ny faritra Analamanga fotsiny fa manerana izao tontolo izao mihitsy ary izany no ametrahanay am-bavaka sy ametrahana eo am-pela-tananao ny olombelona rehetra manan’aina satria antsonao ihany koa izany ry Tompo. Ireny fizahan-toetra rehetra ireny Jesoa ô dia raisinay ho fiantsoana anay ho fampieritreretana anay ka na ao anatin’ny ratsy aza no ahatsapanay sy iainanay izany ary ahatsiarovanay hoe inona ary ity loza amin’atambo ity dia fantatray fa mampitodika anay Aminao misimisy kokoa izany. Dia raisinay ho antso Tompo ô hamelombelona ny finoanay sy ny fanantenanay ary azahoanay fahazotoana hanao ny asanao ka tsy hiato mihitsy izahay raha tsy tontosa izany zara fanompoanay izany, hanana fahasahiana izahay hijoro vavolombelonao mandrakariva isedra ny zavatra rehetra na ao anatin’izany vanim-potoana izany aza. Tompo ô, tehirizo ao anatinay izany toe-tsaina sy izany toe-piainana izany mba ahazoanay manompo Anao amin’ny fifaliana handrosoana sy hihitaran’ny ambaindain’ny fanjakanao. Mivavaka aminao izahay Tompo ô ho an’izay manana hataka manokana ary mangataka ho entina am-bavaka. Apetrakay feno eo am-pela-tananao izy ireo Tompo ô. Ianao no mahalala ny fibitsiky ny fony sy ny hetahetam-pony, Ianao hamaly vavaka azy ireny amin’ny fotoana rehetra. Ireo sahgirana, ireo marary, ireo mana-manjo, ireo azon’ny tsy fidiny, ireo mizaka ny tsindry hazolena, Mpamonjy ô, ho any amin’iza moa izahay. Ao Aminao no misy ny teny fiainana mandrakizay. Raiso izahay ary tazony fa tsy mahatana anao. Valio vavaka izahay fa fantatrao ny fahoriana izay mianjady aminay. Mivavaka aminao izahay Tompo ô amin’ny fisokafan’ny fiangonanay amin’ny Alahady ho avy izao. Apetrakay feno eo am-pela-tananao izany ka omany izahay tena saina fo fanahy ampaherezo izahay mba ahafahanay miombona amin’ny fanatanterahana indray ny fanompoana Anao eto amin’izao vavahadin’ny lanitra izao. Ary izany fiomananay izany Tompo ô dia ataovy tanteraka ka ho fifaliana safo nonoka ho anay ao anatin’ny fifankatiavana toy ny mpirahalahy miara-monina amin’ny fifaliana no iarahanay manatanteraka ny fanompoana masina indray eto anivon’ny fiangonanao.Izay mahasoa ny fiainanay Tompo ô tanterao aminay na dia tsy voatonon’ny vavanay aza. Fa ireny rehetra ireny dia akambanay sady farananay ho amboara tokana amin’ilay vavaka nampianarinao manao hoe
Rainay izay any an-danitra…
Rehefa izany dia nohiraina ny hira FFPM 194 : 2- 4
HAFATRY NY MPITANDRINA: Miverina misokatra ny fiangonana ny Alahady 6 Septambra 2O2O. Araka izany dia misy fidirana in-telo (7ora maraina , 9 ora maraina , 11 ora maraina). Misy fandraisana ny fanasan’ny Tompo ireo fotoana anankitelo ireo. Ny fianarana katekomena kosa dia miditra amin’ny 2ora sy fahefany ariva.
Tohizana ny fazotoana mivavaka any an-trano / Mila mifampivavaka isika / Tsara raha mandray anjara amin’ny rojom-bavaka / Mila manatanteraka ny voadintsika isika amin’i Jehovah Andriamanitra ary tokony hanefa ny adidintsika.
Rehefa tanteraka izany dia natao ny famakiana ny Tondrozotra ary taorian’ny fanambarana izany no natolotra ny Tsodrano.
Nofaranana tamin’ny fihirana ny hira FF 16 and 2 izao fanompoam-pivavahana izao ary natao ny vavaka mangina nofaranana tamin’ny trinité masina.
Publié le 16 août 2020 31 août 2020
Alahady 16 aogositra 2020
ALAHADY 9 AOGOSITRA
« Indro, feno avonavona ny fanahin’ ireny, fa tsy mahitsy ao anatiny, Fa ny marina ho velon’ ny finoany » Habakoka 2:4
Ny Vaomieran’ny Aimpanahy no nanatanteraka ny Fanompoam-pivavahana tamin’ity alahady ity. Alahady fahasivy manaraka ny trinité ary alahady ankalazan’ny FJKM ny Maritora sy mbola hibanjinana ny lohahevitra « Mahatoky hatramin’ny fahafatesana ny mino » Ny Diakona RABENANDRASANA Jaona no nitarika ny fotoana
Taorian’ny feon-javamaneno, rehefa avy nanantanteraka ny fiarahabana apostolika dia nisaotra sy nidera an’Andriamanitra tamin’ny famakiana ny Salamo faha 66 : 1 – 9. Vita izany dia noredonina ny hira FFPM 16 : 1-3 “Avia ry vazatan-tany ô”. Nanao vavaka fisaorana sy fifonana. Andriamanitra dia Andriamanitra Fitiavana. Mifona Aminy noho ny fahotana vita ary matoky sy mino fa mamela ireo mibebaka Izy. Mangataka ny Fanahy Masina hitarika amin’izay rehetra atao ka hiasa mahery.
RABODOVOLOLONA Lydie, mpampianatra ao amin’ny kilasy faha 4 no tompon’anjara. Vavaka no nanombohany ny fotoana. Ny Matio 6:6 no andinin-tSoratra Masina nandraisany ny hafatra. « Fa hianao kosa, raha mivavaka, dia midìra ao amin’ ny efi-tranonao, ka rehefa voarindrinao ny varavaranao, dia mivavaha amin’ ny Rainao, Izay ao amin’ ny mangingina; ary ny Rainao, Izay mahita ao amin’ ny mangingina no hamaly anao.»
Mila mitandrina mafy tsara isika amin’izao fotoana izao noho ny valan’aretina Corona. Mila mihiboka. Ao antrano no mivavaka, mianatra, manao zavatra maro. Leo ary ity zaza iray ka niresaka tamin’ny reniny.
Tsy mahay miteny mafy angamba hono izy ka tsy maheno ny vavaka ataony Andriamanitra ka mila vidianana fanamafisam-peo (sono) matanjaka be ary hatao avo toerana mba ho mafy ny feo mivaoka ka mba ho ren’Andriamanitra amin’izay ny vavaka ataony momba ny Coronavirus. Tsy mila izany Andriamanitra, hoy ny reniny, fa maheno foana. Mila manana fo madio sy mino rehefa mivavaka, ary matoky. Ho antsika koa izany, na zaza aza isika, dia mihaino antsika foana Andriamanitra ary efa fantany daholo ny faniriantsika rehetra. Mazotoa mivavaka na aiza na aiza misy antsika.
Natao ny hira FFPM 205 : 1 “Ny teninao rehetra”. Ny Diakona RANDRIAMBELOSON Malalatiana no nanao ny vavaka fangatahana ny fanazavan’ny Fanahy Masina ary ny Diakona RAJAONARISON Lanto no namaky Teny. Ny perikopa voalahatra dia 2 Tantara 24:17-22 ; Lioka 11:47-51 ; Hebreo 11:32-40 Nohiraina ny hira FFPM 210 : 1-5 “Zava-tsoa tokoa” mialohan’ny nitsanganan’ny Mpitandrina RAHARIJAONA Solofo Nirina hitory ny Teny.
Ny andinin-tSoratra Masina nakan’ny Mpitandrina ny hafatra dia ny Hebreo 11:32-40 izay Epistily mitanisa sy miresaka ary manome hevitra ny amin’ny finoana notanan’ny firenen’Israely ary finoana tanan’ny kristiana koa hatram’izay ka mandrak’ankehitriny .
Izany no asongadina amin’izao fotoana mihavaka hitondrana am-bavaka sy hanokanana fotoana ho an’ny Komity Fanorenana ny Tsangabaton’ny Maritiora eo amin’ny FJKM sy eto Amparibe Famonjena ihany koa. Ny lohahevitra banjinintsika sy hitaizana ny fiainam-panahintsika mandritra ity volana aogositra ity dia hoe « Mahatoky hatramin’ny fahafatesana ny mino »
Io toko faha 11 io dia toa mitaona ny olona hiaina sy hivelona amin’ilay fotokevi-dehibe izay bangoin’ity Epistily ity. Fampianarana tian’i Paoly hiampita koa ka hita any amin’ny Epistilin’ny Romana sy Epistilin’ny Galatiana nalaina tao amin’ny Habakoka 2:4 « Indro, feno avonavona ny fanahin’ ireny, fa tsy mahitsy ao anatiny, Fa ny marina ho velon’ ny finoany » Manambara io fa ny marina amin’ny finoana no velona na ny marina no velon’ny finoany. Fotokevitra roa lehibe no ampitain’ny mpanoratra ao anatin’izany Epistily izany : -Finoana mahavita asa mahagaga -Finoana maharitra ny mafy rehetra izay miseho eo amin’ny fiainana
Finoana mahavita asa mahagaga ( Hebreo 11 :32-35)
Tsy ny olona rehetra niasa teo amin’ny fireneniIsraely fa santionany, notsongaina mba hampivoitra izany finoana hitondra hafatra sy aim-panahy
Tsy olona masina be fa samy nanana ny kilemany sy ny fahalemeny nefa nantsoin’Andriamanitra
Misy ny nanehon’Andriamanitra asa mahagaga
Misy fandresena natolotr’Andriamanitra
Fampaherezana natolotra tao anatin’ny fahakiviana
Natsangana sy najoro ny KFTM :
– hatsiarovana sy halalana ny asa nataon’Andriamanitra ka raisin’ny malagasy ho finoana
– hampirehitra tsara ny finoana sy fananatenana
– Najoro ho fianarana sy fanarahana ny dian’ny maritiora
Finoana niaretana ny mafy teo amin’ny fiainana (Hebreo 11 :36-40)
Misy ny fanehon’Andriamanitra fomba samy hafa araka ny sitrapony
Ao no hiaretana fijaliana
Ao no hianjadian’ny eso sy latsa
Ny fakampanahy mafy sy sarotra sedran’ny olon’Andriamanitra
Avelan’Andriamanitra lalovana izany satria mizaha toetra antsika Izy mba hafantarantsika ny tena finoantsika. Ny asan’Andriamanitra dia ho an’ny olona manokana ary koa ho an’ny firenena manontolo
Alahadin’ny maritiora ity alahady ity. Ao anatin’ny vola aogositra mba hahatonga ny olona hatoky an’Andriamanitra na dia misy sedra aza ny eo amin’ny fiainany. Ny Fiangonana FJKM dia voasokajy ho Fiangonana maritiora. Ipaka any amin’ny fara-tampiony ny zavatra mitranga izao. Ho mafy ny famelin’ity valan’aretina ity ka mila matoky isika. Ny Tompo tsy mampitondra antsika izay tsy zaka. Tsy maintsy misy irika hatafavaoka foana Andriamanitra miasa. Andriamanitra mitondra ny olona tsirairay. Ny finoana dia arakakaraky ny olona. Mila matahira ny finoana ianao ary matoky hatramin’ny fahafatesana satria mino ianao. Na inona na inona mianjady aminao ka mampanaintaina anao dia ireny no hilana anao hijoro amin’ny finoana. Aoka ianao ho maritiora matoky hatramin’ny fahafatesana.
An’Andriamanitra ny voninahitra, ho ahy sy ho anao ny fahafahana mijoro ho maritora matoky hatramin’ny fahafatesana. Amena
Nisy feon-javamaneno fohy taorian’ny toriteny ary nisy hiran’ny Sampana Taniketsa.
Rehefa izany dia nivavaka ny Mpitandrina. Misaotran’i Jesoa Kristy noho ny ainy ho fanavotana. Ny fandreseny ny fahafatesana no finoana velona tanan’ny krsitiana. Misaotra koa noho ny lesona roa voaray. Na be aza ny zava-tsarotra lalovana dia manome toky sy fanantenana ny Tompo hahatonga matoky hatramin’ny fahafatesana ka handova fiainana ao amin’i Kristy Mitondra ambavaka ny Fiangonana eo amin’ny sahan’ny FJKM. Vonona hanoy ny asanao izahay Jesoa koa tafio ny herinao ka aza avelanao hivena amin’ny finoana. Fantatrao Tompo ny zava-tsarotra lalovanay ka apetrakay feno eo am-pelatananao izany mba hisy vaha olana. Mivavaka ho an’ny Fitandremana, ny mpianakavin’ny finoana rehetra. Mivavaka ho an’ity alahady ity izay hitondrana am-bavaka ny Komity Fanorenana ny Tsangabaton’ny Maritiora. Mivavaka ho an’ny fiainanan’ny firenena. Mahatsiaro ireo zanaka hiatrika fanadinana, ireny ny ho avin’ny firenena sy ny Fiangonana. Mivavaka ho an’ny raim-pianakaviana sy renim-pianakaviana amin’ny asam-pivelomana. Ny finoanay sy ny fanantenanay dia na dia mandalo fotoan-tsarotra aza dia mbola manana anao Kristy. Mivavaka ho an’ireo fianakaviana manana havana marary ary misy ny nodimandry, misy ny efa sitrana, misy ny mbola marary. Mametraka ny fitondram-panjakana eto amin’ity Nosy ity eo am-pelatanan’Andriamanitra. Fantarao Tompo ny fikasanay sy ny fanirinay rehetra na dia tsy voatonon’ny vavanay aza fa ao anatinay ao. Hainao ny zavatra rehetra Tompo ô ka atolory anay izany. Ampitoero ho lalimpaka ny fifankatiavan’ny Fiangonanao. Tehirizo mandrakariva ny finoanay mbola hiasanay tsara. Rehefa Ianao no miasa Tompo dia mazoto ny Fiangonanao, mijoro ho vavolombelona.
Izao vavaka izao dia nakambana sy nofaranana tamin’ilay vavaka nampianarin’i Jesoa : « Rainay izay any an-danitra… »
Natao ny fanononana ny fanekem-pinoana laharana faharoa, avy eo dia nohiraina ny hira FFPM 639 : 1-3 “Ry miaramila! Mandrosoa izao.”
Ny Mpitandrina no namarana ny fotoana, nisaotra an’Andriamanitra tamin’ny nahafahana nanatanteraka ny fotoana ary nametraka izao hafatra manaraka izao :
Aoka hifampitondra am-bavaka mandrakariva isika
Arao hatrany ny fandaharam-potoana ao amin’ny Facebook ho an’ny mpiangona mba hitombontsika amin’ny finoana
Mandraisa anjara amin’ny Rojom-bavaka
Tanterao ihany koa ny adidy izay azontsika atao
Dia ho tanteraka amintsika tokoa anie ny vinantsika izay manao hoe : « Amparibe Famonjena matahiry ny finoana, mifankatia, miasa amin’ny fahazotoana »
Natolotry ny Mpitandrina ny tsodrano taorian’ny fanononana ny tondrozotra 2020.
Ny Atema faha 5 no hira namaranana ny fotoana
Ho an’Andriamanitra irery anie ny Voninahitra! Amin’ny Anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen
Alahadin’ny sampana DORKASY
“Mahatoky hatramin'ny fahafatesana ny mino”
Alahady faha valo manaraka ny trinité, Alahady voalohany hibanjinantsika ny hevitra hoe « MAHATOKY HATRAMIN’NY FAHAFATESANA NY MINO » . Fotoana izay mbola voasokajy anatin’ny fihibohana ka fanompoam-pivavahana tanterahina amin’ny horonontsary no arahintsika, Ny Litorjia tamin’ny endriny faharoa no nentina nanatontosana ny fanompoam-pivavahana Ny filohan’ny Sampana Dorkasy, Ramatoa RAKOTONARIVO Domoina no nitarika ny fotoana Ny Mpitandrina RAHARIJAONA Solofonirina kosa no nitory ny tenin’Andriamanitra.
Feon-javamaneno no nentina nanombohana ny fotoana anio. Rehefa izany dia niroso tamin’ny Fiarahabana Apostolika ny mpitarika.Novakiana ny Salamo Fiderana tao amin’ny bokin’ny Salamo 34 : 1- 10. Nanaraka izany ny hira tao amin’ny Fihirana FFPM 36 and 1 – 3 « Moa ho haiko ho tantaraina »
« Ry Jeosa Kristy Tomponay ô ! Faly izahay fa afaka misaotra sy midera ary manome voninahitra Anao. Misaotra Anao izahay fa Ianao irery ihany no Tompon’ny hery sy fahefana, any an-danitra sy ety an-tany. Aoka ary ho feno ny fanatrehanao izao fanompoam-pivavahana tanterahanay izao ka hahazo hery sy fiadanam-po izahay amin’ny alalan’ny fanahinao masina. Ary hafana fo amin’ny asanao rehetra ka tsy hisy hiraviravy tanana na halemy lohalika fa hijoro sy hiady ny ady tsaran’ny finoana ka hahatoky hatramin’ny fahafatesana. Eto izahay dia mivavaka manokana ho an’ny Sampana Dorkasy eto anivon’ny fiangonanao, sitrakao ny hampielezanay ny filanzantsaranao eto anivon’izao tontolo izao kanef amandrakariva dia tsy mahatanteraka izany sitraponao izany izahay mpanomponao ka mifona sy miaiky ny fahotanay. Misaotra indrindra Tompo ô ! Nohon’ny famenal-keloka izay atolotrao . Amin’ny anaran’i Jesoa Kristy no angatahanay izany vavaka izany. Amen
Zoky Farasoaniaina Mbola no nitondra ny hafatra ho an’ny ankizy sy ny tanora ; Niarahana namaky ny tenin’Andriamanitra izay hita ao amin’ny Dan 6 : 11d : « Koa intelo isan’andro no nandohalika ka nivavaka sy nisaotra teo anatrehan’Andriamaniny izy, satria fanaony hatramin’ny taloha izany » Fomba fiainan’i Daniela io teny novakiana io. Izy dia olona tia an’Andriamanitra ary mahatoky Azy. Ny mpanjaka tamin’izany dia nanery ny olona hivavaka aminy fa i Daniela kosa dia tsy nanaiky izany ary noho ny fanoherana izay nataony dia natsipy tao anaty lavaka misy liona izy. Tsy natahotra anefa i Daniela, ary ny ampitso rehefa nijery ny mpanjaka dia gaga satria tsy maty i Daniela ka tsy nikasika azy ireo Liona, Nahatoky an’Andriamanitra izy ka nilaza fa ny anjely no nanakatona ny vavan’ireo liona.
Amin’izao vanimpotoana iainantsika izao koa Andriamanitra dia tokony hametrahantsika fitokisana na dia eo aza ny valan’aretina. Tokony mamaky ny tenin’Andriamanitra isika mba hahafantarantsika izay tokony ataontsika.
Rehefa vita ny fanoharana tamin’ny tantara dia nanao vavaka fisaorana sy fanetre-tena ny mpampita hafatra ho an’ny ankizy sy ny tanora.
Ny hira FFPM 177 and 3 « Ry Fanahy Mpanazava » no notanterahina mialoha ny famakiana ny tenin’Andriamanitra, ary nisy ny vavaka mialoha izany :
« Ry Tompo malala ô ! tsy mitsahatra midera sy misaotra Anao izahay noho izao fotoana izao. Mbola nomenao andro hahafahanay mihaino ny teninao. Fenoy ny Fanahinao Masina izahay ry Jesoa mba hihaino tsara ny hafatrao ary hankato ny fampianarana izay ampitainao aminay. Tsy ho mpihaino fotsiny izahay fa tena mpankato Anao tokoa a hahazoanay tokoa ny famonjeana avy Aminao. » Amen.
Ireto ny teny novakiana izay mifanaraka amin’ny perikopa dia ny : Daniela 6 / 17 – 25 / Matio 2, 13 -15 / Asan’ny Apostoly 20 / 17 – 24 Rehefa vita izany dia natao ny hira FFPM 177 and 1 – 2 « Ry Fanahy Mpanazava »
Miditra lohahevitra vaovao isika izao izay manao hoe « MAHATOKY HATRAMIN’NY FAHAFATESANA NY MINO » .
Ny olona mety hanana izany fahatokiana izany dia tsy maintsy olona manana fitiavana ny Tompo ary miorina tsara amin’ny fanantenana ao amin’i Jesoa Kristy ary resy lahatra amin’ny finoany.
Ny perikopa izay hakana ny hafatra dia ny ao amin’ny Asan’ny Aposotoly 20 / 22 ; 24. i Paoly eto dia mampiseho fa mahatoky an’Andriamanitra amin’ny asa fanompoana izay namena ho tanterahiny.
Ireto no hevi-dehibe izay ho velabelarina ato anatin’izany teny izany :
– Nasehon’i Apostoly Paoly fa mandà ny tenanany izy ho an’ilay efa nanolorany ny tenany dia i Jesoa Kristy izany
– Nahafoy ny ainy izy ho an’ny Ilay naonolotra ny famonjena mba hananany anjara ao amin’izany.
1- Mandà tena ho an’ny Tompo :
Fantatra fa tamin’ny fandehanan’i Paoly voalohany dia nisedra zavatra sarotra izy. Tao ny fanoheran’ny Jiosy ny filazantsara ary nanahirana azy izany.
Ny nanehony ny fandavantenany dia :
– Tsy natahorany ny zavatra mety hanjo azy nefa,
– Nahatoky ny fitarihan’ny Fanahy Masina izy, satria rehefa matoky azy isika dia lavorary ny asa fanompoana.
Nandray izany filazantsara izany ny Efesiosy ary niorina ny fiangonana.
Tsy tanteraka anefa izany raha tsy ao ny finoana, fanantenana ary fitiavana ny Tompo dia tsy tanteraka izany. I Paoly dia resy lahatra ka nasehony sy nijoeroany vavolombelona izany.
2- Mahafoy ny ainy ho an’ny Tompo
Ny fitorian’i Paoly ny filazantsara sy fitoriana dia nandehanany tamin’ny toerana lavitra sy nanaovany ezaka maro.
Nanohitra ny fanompoantsampy izy ka nitory ny tenin’Andriamanitra. Izany no nahatonga ny Jiosy ho tezitra taminy satria i jesoa Kristy izay novonoin-dry zareo no toriany fa nitsangana tamin’ny maty.
Isika dia manana fomba fijery toy ny hoe : lahy tokana ny aina hany ka lasa mitandrina mafy amin’izany. Ny an’i Paoly Apostoly eto dia natolony ho an’Andriamanitra ny azy.
Porofon’izany ny nahafaty azy ho martiora toy ireo Apostoly namana ihany koa.
Ny fahatsapana ny fahatsaran’ny hoe fiainana ao amin’ny Tompo no hanamafisana ny Fahany mano hoe : dia sambatra tokoa anie izay maty ao amin’ny Tompo amin’ny fanatanterahana ny asany fa dia mitsahatra amin’ny sasarany izy, ny asany manaraka azy. Izany no hafatry ny apostoly Paoly.
Ho an’Andriamanitra irery anie ny voninahitra Amen.
Nisy feon-javamaneno fohy ary nanantanteraka hira ny Antoko Mpihira Hasin’ny Famonjena.
Ry Jeosa Kritsy Tompo o, misaotra ano izahy nohon’ny teny sy ny hafatra izay napetrakao taminay. Fantatrao fa kanosa izahay, kanefa rehefa Ianao no momba anay, iza no atahoranay satria miaraka aminay ianao Jeosa Kristy, Aza avela hanana finoana matimaty na ho olona ketraka izahay. Ataovy hita sy tsapa eo amin’ny fiainanay ny fitiavanao Kristy, ka hananay fandavan-tena ho anao ilay namonjy anay.
Mivavaka aminao izahy ho an’ireo mpitondra Fiangonana sy mpitory ny Filazantsara rehetra ; ho an’ny kristiana rehetra eto amin’ny Fitandremana Amparibe ; vavaka ho an’ireo manaraka ny fanompoampivavahana avy any an-trano ; vavaka ho an’ireo tsy manaraka izany ihany koa ; vavaka ho an’ny sampana dorkasy ; vavaka ho an’ny FJKM manontolo ; vavaka ho an’ny tany sy ny firenena, indrindra amin’izao fotoan-tsarotra izao ; vavaka ho an’ireo mpitsabo sy mpikarakara ara-pahasalamana ; vavaka ho an’ireo mpitondra filaminana mba handry fahalemana ity Nosinay ity ; vavaka ho an’ireo marary, ireo sahirana sy azon’ny manjo ; vavaka ho an’ireo manana hataka manokana ;
Izany vavaka izany dia ampiarahinay amin’ilay vavaka nampianarin’ny Tompo manao hoe “Rainay izay any an’danitra…” Amena
Fanekem-pinoana laharana voalohany no natao, rehefa vita izany dia natao ny hira FFPM 306 and 1 – 3 « Mamafaza voa, ka aza mba malaina »
Natao ny hira Fihirana Fanampiny 5 and 1 – 2 « Izaho no fananganana ny maty », rehefa vita izany dia notononina ny Tondrozotra 2020 ary notanterahan’ny Mpitandrina ny Tso-drano. Rehefa vita izany dia natao ny hira famaranana ao amin’ny Fihirana Fanampiny 5 and 3 ary nitohy tamin’ny Vavaka Mangina
Nitarika ny fotoana : RAKOTONARIVO Domoina
Fotoana ho an’ny ankizy sy ny tanora : Zoky Farasoaniaina Mbola
Namaky ny tenin’ndriamanitra : Raharisata Lalanirina